▄ မင်းကိုနိုင် (၁၉၆၂ – ) – Min Thayt
• အမည်ရင်း ပေါ်ဦးထွန်း။
• ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွား။
• မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့ ဇာတိ။
• အဖ ဦးသန့်ညွှန့် ၊ အမိ ဒေါ်လှကြည်။
• ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်။
• ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ။
• ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ။
• အာဏာရှင်ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သူ။
• ဒီမိုကရေစီလူထုလှုပ်ရှားမှု၏ တပ်ဦး၌ ဦးဆောင်ခဲ့သူ။
အဟောအပြောအားဖြင့်၊ ကဗျာအားဖြင့်၊ ပန်းချီအားဖြင့် လူထုနှလုံးသားကို ညှို့ယူနိုင်တဲ့ ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအတွက် လူထုရဲ့ဆန္ဒအားကို အနုပညာအား ဖြင့် ဖန်တီးလှုံ့ဆော်နိုင်သူဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံရေးအရလည်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘဝကို အကြိမ်ကြိမ် ရောက်ခဲ့တယ်။ ထုသားပေသားကျအောင် ထုထောင်းခံခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ဇွဲနပဲကြီးပြီး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို မသွေဖီအောင် တည့်မတ်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို မရွေးချယ်ဘဲ၊ နိုင်ငံရေးကို စာပေအားဖြင့်၊ အနုပညာအားဖြင့် သိမ်မွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကိုနိုင်ဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် စစ်အစိုးရရဲ့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်။ အနုပညာ စိတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်သူဖြစ်သလို၊ နိုင်ငံရေးစိတ်နဲ့ အနုပညာတွေကို ဖန်တီးသူလည်းဖြစ်တယ်။ မင်းကိုနိုင်ဟာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် ၈၈ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို တပ်ဦးကနေ ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ၊ အာဏာရှင်ဖြုတ်ချက်ရေးအတွက် တောတွင်းလက်နက်ကိုင်နည်းနဲ့ အစိုးရကို တော်လှန်ရမယ် လို့ ယူဆခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းကိုနိုင်ဟာ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို မရွေးချယ်ဘဲ၊ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်သောနည်းနဲ့ အာဏာရှင်ကို ဦးဆောင် တော်လှန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကိုနိုင်ဟာ နိုင်ငံရေးသမားလည်းဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။ အနုပညာသမား လည်းဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူထုနှလုံးသည်းပွတ်ကို ဆွဲယူတဲ့နေရာမှာ၊ တခြားသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တွေထက် ပိုမိုသာလွန်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ အကြောင်းကတော့ မင်းကိုနိုင်ဟာ လူထုကို နှလုံးသားနဲ့ ဦးဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုနိုင်ရဲ့ အပြောအဟောတွေနဲ့ သူရေးစပ်တဲ့ကဗျာတွေဟာ တော်လှန်ရေးလူထုအတွက် အားဆေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အာဏာရှင်တွေဆီ ပို့လွှတ်တဲ့ မြားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ မင်းကိုနိုင်ရဲ့ကဗျာတွေဟာ သီချင်းတွေဖြစ်ထိုက်အောင်အထိ တော်လှန်ရေးနှလုံးသားသံစဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာပဲ မင်းကိုနိုင် ထောင်က လွတ်လာတယ်။ ထောင်က လွတ်လာပြီး နောက်ပိုင်း လူထုကိုယ်ကျင့်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ စိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးအတွက် မင်းကိုနိုင်ဟာ မြန်မာပြည် အနှံ့ လှည့်လည်ဟောပြောမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သိပ်ထိရောက်ခဲ့တယ်။ မင်းကိုနိုင်ဟာ လက်တွေ့နိုင်ငံ ရေးအခင်းအကျင်းမှာ၊ ပါတီ/လွှတ်တော်/ ပေါ်လစီ/ အုပ်ချုပ်စီမံမှုကိစ္စတွေထက် လူထုစိတ်ဓာတ်ရေးရာ စုစည်း ချက်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ပိုပြီး စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မင်းကိုနိုင်ဟာ အခုထက် ထိ ပေါ်လစီကော်ရစ်ဒါပေါ်လျှောက်နိုင်မယ့် အာဏာပလက်ဖောင်းကို မနင်းခဲ့ဟန်တူပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူထုဟာ မင်းကိုနိုင် ကို ချစ်တယ်။ မင်းကိုနိုင်ကို သံယောဇဉ်ရှိတယ်။ မင်းကိုနိုင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ကို ဦးညွှတ်ကျတယ်။ မင်းကိုနိုင် ပြောတဲ့ သတင်းစကားမက်ဆေ့ချ် တစ်ခုချင်းစီကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး လက်ခုပ်ဩဘာပေးခဲ့ကြတယ်။ မင်းကိုနိုင်ဟာ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး ကဗျာအားဖြင့် အာဏာ ရှင်ကို အံတုခဲ့သူဖြစ်တယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ အံတုခဲ့သူဖြစ် တယ်။ နိုင်ငံရေးအရ စွဲမြဲပြီး ကိုယ်ကျင့်အရ ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ၈၈ ကျောင်းသားမျိုးဆက်အတွက် ပြယုဂ် အနေနဲ့ ဖြစ်တည်ထိုက်သူလို့ ယူဆတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခရီးကြမ်းမှာ၊ အာဏာရှင်ကို လက်သီးဆုပ် မြဲမြဲနဲ့ ခံတိုက်ဖို့ အတွက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ထက်သန်ပြင်းပြတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အမြောက်အမြားရှိတယ်။ အဲသည့်အထဲက မင်းကိုနိုင်ကို အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားဖော်ပြထိုက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ တိုက်ပွဲဝင် တပ်ဦးများ အပိုင်း ။
Tagged 8888 Student Leader, 8888 Uprising, Democracy, Democratization, Political Animal, Political Drama, Political History, Politician, Politics
Previous post ကိုကိုကြီး (၁၉၆၁ – )
Next post တင်ပြပုံ အယူအဆ
One thought on “▄ မင်းကိုနိုင် (၁၉၆၂ – )”
I love readingapost that will make men and women think. Also, thank you for permitting me to comment. Dona Will Kimmie